Nhau - Flour Mill Kudyara Plansifter Muchina / Plansifter YeRice Kukuya Mills
FSFG akateedzana mapurani anoshandiswa zvakanyanya muhupfu hwemazuva ano chigayo uye mupunga kukuya zvigayo.Zvinonyanya kushandiswa kugaya gorosi nepakati kusefa zvinhu, zvinogona zvakare kushandiswa kweupfu cheki kusefa. Yakasiyana sieving dhizaini inoshanda kune akasiyana kusefa ndima uye akasiyana epakati zvigadzirwa.
- FSFG yakateedzana Plansifter inotyairwa nemota inoiswa mukati meiyo huru furemu uye inopokana-yakaenzana neyekuremerwa. Muchina wega wega une zvikamu zvina, zvitanhatu, kana zvisere zvisero mukati. Zvinhu zvakasiyana zvinoyerera zvichienda muzvikamu zvakasiyana munzira yavo. Sekureva kwemunhu dhizaini yezvinhu zvakasiyana, masefa anozunza akasiyana granular zvinhu kune akasiyana mapara muupfu zvigayo kana muchina wese uchimhanya.
- Sieve furemu saizi: 640x640mm, 740mmx740mm, kana yakaitwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
- Yakatsindirwa simbi ndiro furemu. Yemukati bhokisi masvingo anopiwa nesimbi isina tsvina. Adjustable counterweight yakaiswa ne SKF (Swedn) yakasarudzika kaviri mitsara roller mabhegi uye yekuzvimiririra inowirirana mhando.
- Sieve mafuremu anogadzirwa nekunze matanda akafukidzwa mukati nekunze nepurasitiki melamine lamination, inogona kudzikiswa, inochinjika. Sieve mafuremu akashongedzerwa neasina simbi tireyi. Chikamu chega chega chakadzvanywa nenzira yesimbi furemu uye kumanikidza masikirini emicrometric kubva kumusoro. Zviri nyore uye nekukurumidza kuchinja kusefa scheme.
- Mahotera ekuburitsa mapurani, kusanganisira matema epurasitiki makapu mukati megiravhiti inoburitsa chiyero.
- Sieve zvishandiso kuve SEFAR mesh.
- Itsva Nova dhizaini masosi anowanikwawo, aruminiyamu yemukati sieve yezvimwe zvinodiwa zvehutsanana.
Plansifter Sefa Inoshandiswa MuZviyo Kugadzira Chidimbu
- Inoshandiswa zvakanyanya mumafuru emazuva ano eupfu, chibage chekugadzira gorosi uye mupunga wekukuya zvigayo.
- Inonyanya kushandiswa kugaya gorosi uye yepakati zvinhu kusefa, inogona zvakare kushandiswa kwehupfu cheki kusefa.
- Yakasiyana sieving dhizaini inoshanda kune akasiyana kusefa ndima uye akasiyana epakati zvigadzirwa.